Mpanamboatra sy mpamatsy acrylic mazava - China acrylic mazava orinasa
tontonana akrilika mazava tsara
Ny akrilika tontonana dia fitaovana plastika mangarahara miaraka amin'ny tanjaka mivaingana, ny hamafiny ary ny hazavany mazava. Ny taratasy akrilika dia mampiseho toetra toy ny fitaratra — mazava, famirapiratana ary mangarahara — fa amin'ny antsasaky ny lanjany ary imbetsaka ny fiatrehana ny fitaratra.
Sheet acrylic mazava dia ACRYLIC, fantatra amin'ny anarana hoe "ravin-taratasy plexiglass voatsabo manokana". Fitaovana simika izy. Ny anarana simika dia "PMMA", izay an'ny alikaola propylene. Ao amin'ny indostrian'ny fampiharana, ny akora akrilika amin'ny ankapobeny dia miseho amin'ny endrika sombin-javatra, takelaka, fantsona, sns.
Ny mazava acrylic Sheets dia manana mangarahara tena tsara, mazava kristaly rehefa nohosorana poleta, fandefasana hazavana hatramin'ny 93,4%. Hazavana avo sy malama tsy misy raharaham-bahiny; fanoherana tsara ny toetrandro sy ny fanoherana ny maripana nefa tsy manjavona sy manjavozavo;
Fanoherana ny toetrandro tena tsara: ny fahaiza-miaina amin'ny tontolo voajanahary, na dia tara-pahazavana lava aza ny rivotra, ny rivotra sy ny orana dia tsy hanova ny fananany, ireo toetra manohitra ny fahanterana, dia azo antoka koa raha ampiasaina any ivelany.
Ny takelaka akrilika Aquarium dia voaravaka akrilika mazava ihany koa. Tsy ara-dalàna fa matevina kokoa noho ny 15mm izy io.